अनुरोध . Request – माहुरी . Bee
अनुरोध . Request
परदेशीका हाँसोले बन्छ देश, आँसुमा झेल नखेले
झेलका खेल खुल्दै जान्छ, जब बोल्न थाल्छन् परदेशीले
परदेशी हामी दुख्ने छौं सँधै परदेशी नहाँसे
सुनाउँला हामी त्यो कथा कसलाई परदेशी नबाँचे
सहयोगका लागि अनुरोध अनि धन्यवाद !
परदेशीका दयालु तन, मन र धनले धेरैलाई सहयोग गर्दै आएका कुरा विदितै छ। जनशक्ति/परदेशी राष्ट्रको धन हुन। राष्ट्रिय आम्दानीको ठूलै हिस्सा योगदान गरेर नेपाली परदेशीहरुले विश्वमै आफ्नो परिश्रमको उच्च मूल्यांकन गराउन सफल भएका छन। तथापि परदेशीको योगदानलाई सहजिकरण गर्ने सवालमा नीति निर्माताको ठूलो समूह चुकेको अनुभव पनि छ। नेपाली परदेशीहरुमा शीप, जोश र जाँगर भरिएर आएको छ। त्यसलाई सदुपयोग गर्नुपर्ने कुरा मात्रै आजको आवश्यकता हो। त्यसैले परदेशीहरुका भावना, वेदना र बिचारको अभिव्यक्तिलाई यस परदेशीले महत्वपूर्ण स्थान प्रदान गर्ने कोशिस गर्दैछ। परदेशीलाई स्थायित्व दिनुपर्ने दायित्व परदेशीहरु कै हो र कर्तब्य पनि। यिनै दयालु मनका अनुभव सुन्नका लागि यसपटक हामी परदेशिहरुले परदेशीलाई नै सहयोग गर्ने अठोट गरेका छौँ।
हामीहरुको हाँसोलाई परदेशीहरुको परिश्रमले साथ दिएको छ; त्यसैले हामीहरु वहाँहरु प्रति आभार छौं।
सहयोग . MOTIVATION
विज्ञापन . ADVERTISEMENT
कृपया परदेशीलाई ब्यापारिक संदेश (advertisement) उपलब्ध गराएर आफ्नो सफलताको यात्राबारे विश्वलाई जानकारी गराउनुहोस। हामीलाई तपाईकाे सहयोग र सदभाव अत्यन्तै जरुरि छ। तपाईं परदेशीलाई स्थायित्व दिनुहोस; परदेशीले तपाईको सफलताको कथा लेखिरहने छ। तपाईंको सहयोगका लागि हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहान्छौं 🙂
चन्दा . DONATION
तपाईको मात्र एक कप कफीले परदेशीको आयू लम्बिन सक्छ। लाखौँ परदेशीको आवाजलाई गुञ्जाउन गरेको तपाईंको योगदानको हामी उच्च मूल्यांकन गर्ने प्रण गर्दछौं। आउनुहोस, यसपटक जति सकिन्छ परदेशीलाई सहयोग गरौँ; परदेशीले हाम्रो आवाज बोलिदिन्छ। तपाईंको सहयोगका लागि हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहान्छौं 🙂
योगदान . CONTRIBUTION
परदेशी यौटा सिंगो सिद्धान्त हो। उसका नलेखिएका र नदेखिएका उतार-चढावका आफ्नै अनुभवहरु छन। हामी तिनै नलेखिएका र नदेखिएका तर सुन्नै पर्ने सत्य तथ्य लिएर आउंदै छौं। कृपया हामीलाई आफ्ना अनुसन्धान, लेख, रचना, घटना र अनुभव लेखी पठाउनु होला। तपाईको बिचारले परदेशीहरुको यात्रालाई सहज बनाउन सहयोग गर्ने छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। हामी तपाईंको सहयोगका लागि हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहान्छौं 🙂
परदेशीका बारेमा कसले के भन्नुभयो !
परदेशीका बारेमा तपाईंलाई लागेको कुरा (Quotation) यहाँ राख्नका लागि हामीलाई पठाउनुहोस; तपाईको बिचार राख्ने छौं
― तपाईको नाम
परदेशी तपाईलाई कस्तो लाग्यो, हामीलाई लेख्न नभुल्नुहोला
हाम्रो मूल्यांकन/सफलता तथ्याङ्कमा